တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ဟု တတိယအကဲဖြတ်အဖွဲ့ထုတ်ပြန် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်(၂၀၁၆-၂၀၂၀) ကို အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တတိယအစုအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ထုတ်ပြန်သော အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရသည်။လုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ် (Action Plan) တွင်ပါဝင်သည့် ရည်မှန်းချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းများ ၁၆၈ ခုစလုံးကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ အများစုကို သတ်မှတ်ကာလထက်စော၍ပြီးမြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်ကို ကျော်လွန်ပြီးမြောက်ခြင်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်သည့် Action Plan အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ ယေဘုယျပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၀ ထိကာလအတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပြည်သူ့ဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအယူအဆကို ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာခြင်းနဲ့အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းနဲ့အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ ” ၊ ပြီးတော့ Action Plan ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး တက်ကြွစွာ တွန်းအားပေးဖို့ လက်တွေ့ပြုမူကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးများ ၊ အစိုးရအမှုထမ်း အရပ်သားအမှုထမ်း လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ(civil and political rights) ၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအခွင့်အရေးများ ၊ အမျိုးသမီး ၊ ကလေးသူငယ် ၊ သက်ကြီးရွယ်အို နှင့် မသန်စွမ်းများ၏ အခွင့်အရေးများ အကာအကွယ်ပေးခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေခွင့် နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဖလှယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သည့်အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အလုံးစုံဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အောင်မြင်မှု နှင့် အားလုံးက လေးစားရသော အတော်အသင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ရေးအောင်မြင်မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အလွန်အရေးပါသော ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုကို ဦးတည်စေခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
ယင်းအကဲဖြတ်မှုကို အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ် နှင့် တရုတ်လူမှုအသိုက်အဝန်း လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်၏ ပူးတွဲဆွေးနွေးမှုယန္တရား နှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ နှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အနောက်တောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၏ လူ့အခွင့်အရေးအင်စတီကျု့တို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, Sept. 29 (Xinhua) — The National Human Rights Action Plan of China (2016-2020), released by the Chinese government in September 2016, has been fully implemented, according to an evaluation report by third-party experts.
“Generally speaking, from 2016 to 2020, China adhered to the people-centered development concept, earnestly implemented the constitutional principle of ‘respecting and protecting human rights,’ and took practical measures to actively promote the implementation of the objectives and tasks” of the Action Plan, read the report.
It noted an improvement in the protection of people’s economic, social and cultural rights, civil and political rights, the rights of ethnic minorities, women, children, the elderly and the disabled, the promotion of human rights information dissemination and education, and achievements in relevant international exchanges and cooperation.
In particular, the report hailed China’s success in eliminating absolute poverty and buildingamoderately prosperous society in all respects, which have led to significantly greater protection for human rights in China.
The evaluation was commissioned by the Joint Meeting Mechanism of the National Human Rights Action Plan and conducted by the China Society for Human Rights Studies and the Human Rights Institute of Southwest University of Political Science and Law. Enditem